XOG: ”Xisbi ku sheegyada dalka ka jira waa laba wajiilayaal!”, waxa sidaa yiri | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: ”Xisbi ku sheegyada dalka ka jira waa laba wajiilayaal!”, waxa sidaa...
Xildhibaan Cabdi-shakuur Cali Mire
Muqdisho (Halqaran.com) – Mid ka mid ah Xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya, ayaa eedeyn kulul kula dul-dhacay xisbiyada Siyaasadeed ee ka jira dalka.
Xildhibaan Cabdi-shakuur Cali Mire oo ka mid ah Xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxba u reeban Xisbiyadda Siyaasadeed ee dhisan dalka.
Xildhibaankan oo taageero u ah Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in waxa loogu yeero xisbiyada siyaasadda oo hore u taageeray doorashadii Jubbaland ay hadda cambaareynayaan qodobadii kasoo baxay shirkii dib u heshiisiinta Galmudug.
”Waxa uu sheegay siyaasiyiinta ay yihiin kuwa mowqifyadooda is burinayaan oo laba wejiilayaal ah, waxa loogu yeero xisbiyada siyaasadda ee hore u taageeray nidaamka doorashadii sharci darrada ahaa ee Jubbaland ayaa hadda cambaareynaa natiijadii kasoo baxday shirkii dib u heshiisiinta Galmudug. Mowqifyada iska horjeeda iyo siyaasadda laba wejiilenimada waxay caddeyn u tahay inay danaystayaal yihiin”, ayuu yiri xildhibaan Cabdi-Shakuur Cali Mire.
Xisbiyada dalka waa laba wajiilayaal